SHEEKO MURTIYEED - ABAALGUD - iftineducation.com
SHEEKO MURTIYEED – ABAALGUD
aadan21 / December 10, 2011
Waxaa la yiri nin baa nin ku soo hoydey ( martiyey ) habeyn. Markaasaa ninkii lagu soo hoydey si wanaagsan u sooray ninkii ku soo hoydey. Markaasna waxay ahayd abaar xun. Ninka lagu soo hoyday, ninkii ku soo hoydey meel wanaagsan ayuu seexshay. Waagii markuu baryey, ayuu ninkii lagu soo hoydey hadana u keenay sahay martidii, biyo uu ku dhul marana, wuu u keenay.
Markaasaa ninkii martida ahaa ku yiri ninkii uu soo martiyey: “ Ninyahow! Si wanaagsan, ayaad ii gashay, marka maxaad jeceshahay inaan kuugu abaal gudo!”. “ Ma shan jeer baan kuu abaalguda, mase shan goobood baan kaa sheegaa?!”
Markaasaa ninkii la soo martiyey yiri:
“waxaad iga sheegtaa shan goobood”.
1. Martida soomaalidu side bay yeeshaa?
2. Abaar xun haddii lagugu soo hoydo, side baad yeeli lahayd?
SUNTA KU DUUGAN SOOMAALIYA – QAYBTA 7AAD
Dhagayso: Al-Shabaab oo Gaalo Raacyo ku tilmaamaya Culumada Ictisaam ka hor dilkii Dr Axmed